တရုတ်, စိတ်ကြိုက်, လက်ကားအလှအပတူရိယာပလပ်စတစ်မှိုပေးသွင်းသူများ - Dongguan Raofeng Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > အလှအပဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုပလပ်စတစ်မှို အလှအပဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုပလပ်စတစ်မှို > အလှအပတူရိယာပလပ်စတစ်မှို
ဆေးထိုးပစ္စည်းများကိုထိုင်ဝမ်လုပ် ABS HB ကုန်ကြမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ကြမ်းများဖြင့်အာမခံသည်။
အဓိကပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ:ကွန်ပျူတာနှင်း၊ ဝါယာကြိုးနှေး၊ မီးပွားစက်၊ မှန်မီးစက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်နှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ
စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှိုဒီဇိုင်း, မှိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မှိုထုတ်လုပ်မှု, ဆေးထိုးမှို, တပ်ဆင်ဘက်ပေါင်းစုံန်ဆောင်မှု။
မှိုထုတ်လုပ်သောမှို, ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်တိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လှပသောလုပ်ရန်မျက်နှာပြင်နှင့်ထောင့်, သဘာဝနှင့်စစ်မှန်သောဖြစ် radian ။
3. မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မြင့်မားသောမှန် finish ကို
ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အရွယ်အစားသည်ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသော texture effect ကိုသေချာစေရန်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။
ထုတ်ကုန်အတွက်အသုံးပြု 5. ပစ္စည်း
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်သောဒီဇိုင်း၊ ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျစွာ၊ တာရှည်သော ၀ န်ဆောင်မှုကုန်ပစ္စည်းလက်ရာကောင်းမွန်သော၊ လှပပြီးအကြမ်းခံ။ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ
RAO FENG: အဆင့်မြင့်နည်းပညာအင်အားသည်အားကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်
RAO FENG - သင့်အားစိုးရိမ်စရာမရှိစေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့
၁) ဖောက်သည်သည် 3D / 2D ပုံဆွဲများကိုပေးသည်၊ ဝယ်သူပေးသည့်ပုံနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။
၂) သုံးစွဲသူသည်ရုပ်ပုံပြန်ဆိုခြင်းကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D / 2D ရေးဆွဲမှုများပြုလုပ်ပြီးဖောက်သည်မှအတည်ပြုသည့်ပုံနှင့်အညီမှိုများကိုပြုလုပ်သည်။
ပစ္စည်း: ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ - သတ်မှတ်ချက်များ
အမှန်တကယ်ငွေပမာဏ၏ 50% အမိန့်
ကုန်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်၊ ပုံသဏ္structureာန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆန်းစစ်ပါ။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်မှိုသက်တမ်းကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
မှိုကိုမဖွင့်မီပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာကျုံ့နှုန်းကဲ့သို့သော) ၏အသွင်အပြင်အရည်အသွေးချို့ယွင်းချက်များ (ဥပမာမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ညှိခြင်း၊ တံခါးအပြင်အဆင်များ၊ မှိုသက်ရှိမှုအာမခံစသည်တို့) ၏ပုံသဏ္structureာန်ပြproblemsနာများကိုအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
မှိုပုံပန်းသဏ္ဌာန်: မှို၏အသွင်အပြင်ကိုသံချေး၊ တိုက်မိခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်းနှင့်အခြားမော်ဒယ်ချို့ယွင်းချက်များမရှိစေရန်အာမခံရမည်။
မှိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: မှိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှိုသော့ခတ်စာရွက်နှင့်အတူတင်ဆောင်ရပါမည်, ထုပ်ပိုးခိုင်ခံ့နှင့်သံချေးတက်။
မှိုသတင်းအချက်အလက်: မှို၏ပေးပို့၏တစ်ချိန်တည်းမှာ, မှို wear အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရည်ညွှန်းပစ္စည်းများအစုတခုပေးပါ။
Hot Tags: အလှကုန်တူရိယာပလပ်စတစ်မှို, တရုတ်, စိတ်ကြိုက်, လက်ကား, ပေးသွင်း, ဝယ်, စျေးနှုန်း